» Faransa oo ciidamadeeda heegan galisay cabsi ay ka qabto Shabaab
Puntlan iyo Australia oo ka wada hadlay amaanka iyo mashaariicda
Qoraal UN-ka ka soo Baxay kuna Socotay Madaxda Puntland oo lagu Fashilay Arrin dhacday, la sheegayna inay Hor istagi karto Howlaha UN_Ka ee Deeganada…… (Ceebey Tacaal Akhriso
Xubno ka socda Beesha Caalamka oo gaaray Kismaayo kulamana la leh Axmed Madoobe
AMISOM oo howlgal ka bilowday Muqdisho kana hadashay Jubooyinka
SAWIRO + DHAGAYSI: Banaanbax ka dhacay Muqdisho moshin keene iyo miine aase waa isku mid”
Faransa oo ciidamadeeda heegan galisay cabsi ay ka qabto Shabaab
January 13, 2013 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareMadaxweynaha dowlada dalka Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa uu halis xoogan ugu jiro weeraro kaga yimaada kooxaha argagaxisada ah.
Xili uu kahadlayay howlgalkii fashilmay ee gudaha Soomaaliya iyo howlgalka Mali ayaa madaxweynaha Faransiiska waxaa uu sheegay in amaanka dalkaas aad loo adkeyn doono.
“Waxaan ka warhaynaa in kooxaha argagaxisda ah ay isku dayaan weeraro gudaha dalkeena ah’ayuu sheegay Hollande Madaxweynaha Faransiiska.
Magaalada Paris iyo qeybo kale oo dalkaas katirsan ayaa waxaa la geeyay ciidamo badan si ay amaanka uxaqiijiyaan.
Ciidamada Faransiiska ayaa ku guul daraystay howlgal ay ka fuliyeen deegaanda Buullo-Mareer ee gobolka Sh/Hoose gudaha Soomaaliya kaas oo ay doonayeen in ay kusoo furtaan lahayste udhashay dalkaas oo Shabaab ay gacanta ku hayeen.
Waxaana weerarkaas kaga dhintay hal askari, waxaana nolosha looga hayaa askari kale sida ay Shabaab sheegeen.
Sidoo kale Maali ayaa qasaaro ay kasoo gaartay weerar ay ka gaysteen gudaha dalka Mali kaas oo ay mucaaradka dalkaas kula dagaalamayeen.
4 Responses to Faransa oo ciidamadeeda heegan galisay cabsi ay ka qabto Shabaab
Asad says:	January 13, 2013 at 21:53	Hahahahahahahahaha. Walalayaal wa inaad ogatan rucbi in galada ay kudhacday . Ku bishareysta insha allah isbedel aya so iftimayo hadiba dad bulo marer joga loga cabsanayo paris
Reply	mujahid says:	January 13, 2013 at 21:56	masha allah wan ku faarax sanahay guldaarada franci waaaxaan allah kabarya in uu waqti walbo ey gulestaan alshawaab.
Reply	C/naasir says:	January 14, 2013 at 13:20	Faransiis waa xoolo awal ayuu xaasid ahaa haddan taatiga xuma ayuu lasoo galay soomaaliyo balaayo ku qaaday faransiis al shabaab haddaan ahay cakaa foorjo ayaan usiidaynlahadanbea asgariga
Reply	Shawaab says:	April 13, 2013 at 05:55	Galado wey jabtay weyna jebeysaa weyna jabi donta murtad iyo mid diinta ilahey diimay waxan diyar u nahay in aan ladagalano nasriga alle wuu dowyahay